Myanmar: Rava ilay fiangonana bodista manan-tantara · Global Voices teny Malagasy
Myanmar: Rava ilay fiangonana bodista manan-tantara
Voadika ny 05 Jona 2009 13:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, 日本語, Italiano, Español, বাংলা, English
Nirodana nandritra ny asa fanavaozana azy ny fiangonana bodista iray, olona 5 farafahakeliny no maty ary mpiasa sy mpanao fivahinianana masina maro no naratra.
Ny fiangonana ao Danoke taorian'ny fianjerany (New Era Journal)
Any ampitan'ny reniranon'i Yangon ao amin'ny kaomina Dala, faritra Rangoun, no misy ity fiangonana ao Danoke ity, fiangonana manana ahavo 50 metatra. Simba nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Nargis ity fiangonana bodista ity; ary izany antony izany indrindra no nanavaozana azy.
Ny 07 may lasa teo dia nisy “cérémonie du parapluie” natao tao amin'ity fiangonana ity, ary nanatrika tao ny vadin'ny lehiben'ny miaramila, ny jeneraly Than Shew.
Mitantara ny New Era Journal :
Vehivavy antitra monina ao an-tanànan'i Danoke no niteny: “Nianjera ny fiangonana tamin'ny 2 ora tolaknadro teo, nirodana voalohany aloha ny hti-taw (faritra nampihaingoana ny fiangonana), kanefa tsy nisy rivotra akory. Tamin'izay dia niezaka namerina azy ny mpanao trano teny ambony échafaudages. 10 minitra taty aoriana dia nahare feo nigodona be aho hay ny ilany ambonin'ny fiangonana rehetra no nirodana, ka niteraka vovoka be, mainty avokoa ny manodidina. Tsara vintana aho fa ny zanako anankiray niasa teo no naratra teo amin'ny lohany ary anankiray hafa koa no naratra teo amin'ny sorony sy voa teo amin'ny lamosiny.
Milaza ireo vavolombelona fa olona zato eo ho eo no teny an-toerana izay nahitana ireo mpiasa nanao ny fanavaozana sy ireo olona niasa an-tsitrapo nanome tànana ireto mpiasa ireto rehefa asabotsy sy alahady, ka maro tamin'izy ireo no naratra.
Nitantara tao amin'ny New Era Journal ny vavolombelona nanatri-maso:
“Efa akaiky ho vita ny asa fanavaozana ity fiangonana ity, ary efa kely sisa dia norakofana ravina mamiratra izy, ka noho izany dia be olona teny ambony échafaudages. Sarotra be ny hoe hitsambikina hitsoaka. Misy olona efa ho 50 no tototra tao anaty tany tao. Efa ho 50 koa no notaterina teny amin'ny toeram-pitsaboana.”
Mpilatsaka an-tsitrapo avy ao amin'ny vokovoko mena no nilaza:
“Hatramin'izao aloha dia olona 5 no maty. Efa tafavoaka ireo faty ireo. Mbola misy olona tototra ao ary miezaka mitady azy ireo izahay.”
Nalaina tao amin'ny New Journal ireto teny ireto nadika avy tamin'ny birmana.